Iyo SEO Iceberg: Famba Zvakavanzika Zvinhu Zvinokanganisa Organic Kutsvaga | Martech Zone
Iyo SEO Iceberg: Enda kune Zvakavanzika Zvinhu Zvinokanganisa Organic Kutsvaga
Chishanu, January 20, 2017 Mugovera, January 21, 2017 Douglas Karr
Nhasi, takava nerunako runhare pamwe nekambani kwatakakurukura nezve organic makwikwi ekutsvaga zvakadzama (pun yakatarwa). Kunyange chikamu chakakura chedu chevatengi base uye mari yakabatana yakabva kumakambani ari kutsvaga edu SEO hunyanzvi, Takatendeseka nguva dzose tanga tisingafungi nezveSEO. Hazvirevi kuti isu hatizive simba rekutsvaga kwehupenyu - iri zano rechokwadi kwatiri kutyaira masimba uye kunotungamira kune vedu vatengi.
Isu takasiya kuyedza kutamba maalgorithms uye nekuisa backlinks, tichiisa edu kuedza pachinzvimbo chekuongorora kwakadzama kwevateereri vedu vatengi uye zvemukati zvemukati zvinokwezva kutarisa uye kutyaira kutendeuka. Mune mamwe mazwi, hatitarise pa kutsvaga injini, isu tinotarisana ne vashandisi veinjini yekutsvaga. Unogona kubiridzira uye kubatanidza crap kunze kwekambani yako uye unovasundira kusvika kumusoro kwepamusoro pekutsvaga injini mhinduro mapeji (SERPs)… asi zvozodii? Kana zvirimo zvisina kusarudzika, hausi kuzotora mushanyi iyeye kubva kumhara pane yako saiti kuti uite newe.
Pasina kutaura nezve algorithm shanduko uye kufambira mberi kwetekinoroji. Unogona kunge uri kuita chena ngowani nzira (nzira dzisingapesani nemitemo yebasa reKutsvaga Injini), asi kana injini yekutsvaga ikachinja algorithms, unogona kurasikirwa neyako mari. Zvakanaka SEO iyo yakatarisana nehunhu hwevashandisi uye kusimudzira zvemukati; zvisinei, haizorasikirwe nechuru chekudyara kwawakaita.
Iyi infographic inoratidza zvakati wandei nyaya yacho. Haisi izvo zvese zvezvinhu zvaunogona kukurumidza kuziva nekushandira, zvinoratidza huwandu huri kukura hwezvinhu zvinokanganisa bhizimusi rekudyara mukati Search Engine Optimization.
Kuvimbisa kusimba kwakasimba kwenzvimbo yako yekubasa kuburikidza nemaitiro anozivikanwa seKutsvaga Enjiniya Kukosha kwakakosha mukubudirira kwewebhusaiti. Ndeipi poindi mukutengesa zvigadzirwa zvikuru uye kugadzira zvirimo zvemukati kana pasina munhu anogona kuzviwana? Sezvo vashandisi vachichinja nzira dzavanoita tsvagiridzo nekupindura zvemukati, SEO inosanganisa zvinhu zvakawanda zvakaoma izvo zvinogara zvichichinja, saka zvinogona kunetsa kumakambani kuzvibata vega. Red Hot Penny
Uku kumiririrwa kwekutsvagisa injini inoratidzwa seinotevera:
Zuva rinomiririra Google uye rinoburitsa mwaranzi ye tsvaga zvekushambadzira izvo zviri kukanganisa mamiriro eiyo iceberg kana, maficha ewebhusaiti ayo anokanganisa injini dzekutsvaga.
Companies vanomiririrwa nechikepe, vanofanirwa kufamba muchando cheaizi asi chidimbu chidiki chayo chinoonekwa.
Pasi pechiso, pane zvimwe zvinhu kufunga uye kukwidziridzira mhinduro dzakanakisa.
Ndiri kuti unofanira kudaro siya SEO? Chaizvoizvo kwete, ndezvekuti iwe unofanirwa kuisa zviwanikwa zvako kwazvinonyanya kuve zvine simba. Uye kutaura chokwadi, chero SEO chipangamazano uyo anonyepedzera kunzwisisa maGoogle algorithms uye anovimbisa iwe chinzvimbo - pasina kana kumbonzwisisa vateereri vako, kwavo kukurudzira, uye omni-chiteshi nzira dzinokurudzira kutendeuka - hazvina kukodzera kushanda pamwe.
Isu tinoshanda nevatengi kufambisa zvinhu zvine chinjo huru, pane zvakakosha zvakadai sekumhanyisa peji, rakarongedzwa zvakanaka saiti nzvimbo, kutsvagisa kwemazwi makuru, uye kupindura nhare, izvo zvinofanirwa kuve hwaro hwese zano reSEO. Nekudaro, pachinzvimbo chekuongorora zviuru zvezvimwe zvinhu uye kufefetedza kufambira mberi, isu tinoshanda kukudziridza zvemukati zvinotungamira kutarisisa, chiremera, kuvimba, uye shanduko. Iine hwaro hwakasimba, iwo marongero emukati anoita zvine mutsindo. Kunze, kwe
Kune akasarudzika. Takashanda nevaparidzi vari kushandisa makumi emamiriyoni pane avo ekutsvaga uye zvemukati nzira kurwisa vakwikwidzi. Muzviitiko izvi, isu takavaka yakaoma hombe dura matura ayo anoenda kupfuura chero ezvekutengesa SEO chikuva kuongorora zvinhu pazasi. Iwo mikana haisi iyo yako kambani, zvakadaro!
Matipi uye Akanaka Maitiro Ekuyedza Salesforce Kubatanidzwa
Unogona Kukwikwidza paGoogle neBhizimusi Huru?
Ndira 24, 2017 na5: 25 PM
Yakanaka chinyorwa chine makuru mapoinzi. Ini ndinogara ndichiyambira vanhu kuti vange vasina chokwadi nevaya vanopa mazano vanovimbisa peji 1 masosi. Ivo vangangodaro vachishandisa nzira dze spam kana mamwe matema-ngowani matekiniki ayo asingape kukosha chaiko kumagumo kushandiswa, aka anogona vatengi.